Beesha Caalamka oo DF u dirtay digniin culus oo ku aadan Doorashada Galmudug | SMC
Home WARARKA MAANTA Beesha Caalamka oo DF u dirtay digniin culus oo ku aadan Doorashada...
Beesha Caalamka oo DF u dirtay digniin culus oo ku aadan Doorashada Galmudug
Xubnaha Beesha Caalamka u joogo Soomaaliya ayaa digniin culus kasoo saaray Doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo Magaalada Dhuusamareeb ee smcnewss Maamulka Galmudug.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa Smc Newss u sheegay in beesha caalamku ay dowladda Soomaaliya ka dalbatay inay goobjoog oo kaliya ka noqoto doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug.
Beesha Caalamka ayaa ka digtay in Doorashada Galmudug aysan noqon mid lamid ah tii ka dhacday Magaalada Baydhabo ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Waxay Dowladda Soomaaliya ka dalbadeen in Doorashada Galmudug ay u dhacdo si cadaalad oo xalaal ah isla markaasna ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan musharixiinta.
Ugu Dambeyntii Beesha Caalamka ayaa ku baaqday in dhammaan musharixiinta Galmudug loo ogolaado inay aragtiidiisa u dhiibtaan si xor isla markaasna la joojiyo caburinta lagu hayo.
Digniinta Beesha Caalamka ee doorashada Galmudug ayaa kusoo aadeyso xilli Dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey inay kursigaas u diyaarsatay Wasiir Qoor Qoor isla markaasna mar hore si hoose loo qortay Xildhibaanada Maamulkaas.
Previous articleXog: Doorasho deg deg ah oo laga qabanayo Koonfur Galbeed kadib fadeexadii ay shaacisay QM
Next articleWararkii ugu dambeeyey xiisadda ka taagan Somaliland + Sawirro